Revision as of 10:31, 25 June 2019 by Michaellaban (talk | contribs)
1 Anti Mujuru
On 14 November 2018, Anselem Sanyatwe made headlines with his utterance: <“Zvechisoja zvapera! Chii chirikutora nzvimbo munyika? Handidi kuti munzwe nemakuhwa kana kuverenga mumapepa. Mhuka inonzi Zanu PF ichatonga nyika ino iyi narinhi narinhi kusvika madhongi amera nyanga. Nokudaro pamberi neZanu PF, pamberi naCde Robert Mugabe!, Pasi naJoice Mujuru!
(Professionalism is over and many of you are wondering what is happening in the country. I do not want you to hear through the grapevine or read in the newspapers but the animal called Zanu PF shall rule until donkeys have horns. That is why I am saying forward with Zanu PF! Forward with President Robert Mugabe! Down with Joice Mujuru!),” Sanyatwe said.)>
Retrieved from "https://www.pindula.co.zw/index.php?title=Anselem_Sanyatwe&oldid=80632"